Chrome 78 Inouya NeDNS Pamusoro peHTTPS, Yekumashure Mifananidzo Yemunhu uye Zvimwe | Kubva kuLinux
Chrome 78 inouya neDNS pamusoro peHTTPS, yekumashure yemufananidzo kugadzirisa uye nezvimwe
Google ichangobva kuzivisa kuvhurwa kwe iyo nyowani vhezheni yewebhusaiti yako Google Chrome 78. Mune izvo mushanduro iyi inosanganisira iyo CSS zvivakwa uye kukosha API, iyo APIk Native faira sisitimu uye yerima nzira yekuvandudza pane Android uye iOS.
Ndichiri kudivi Kubva pane desktop desktop, Chrome ine nyowani yekugadzirisa dhizaini sarudzon yeiyo skrini inoratidzwa panovhurwa tabu nyowani. Nekudzvanya iyo "Gadzirisa" bhatani mukona yezasi kurudyi yeiyo "Nyowani Tab" peji, iwe uchagara uine mukana kune gallery uko iwe kwaunogona kurodha pasi mufananidzo kunge kumashure.
Bhurawuza ikozvino inoita kuti iwe usarudze pakati pevara pendi yepafuru kana gradient kumashure. Iwe unogona zvakare kusarudza mapfupi (iwo masosi akanyorwa muGoogle yekutsvaga bar) nemaoko kana rega Chrome isarudze zvinoenderana netsika dzekutsvagisa kwemushandisi.
Chimwe chinhu chitsva chakabatanidzwa mune desktop desktop yeChannel 78 ndeyekuti ikozvino une password yekuongorora yakavakirwa mukati. Ichi chishandiso chinotarisa zvakananga humbowo uye mapassword akachengetwa muGoogle account. Kana iro password rave rakakanganiswa, bhurawuza rinokumbira iwe kuti uchinje.
Padivi rebasa yevagadziri vewebhu, mabasa akawedzerwa, saka iyo bhodhi ikozvino inogona kushandiswa mukubatana nemamwe mabasa, maitiro ekuvharira zvikumbiro uye kudzima kurodha pasi. Pamusoro peiyo rutsigiro rwakawedzerwa rwekugadzirisa madhizaina ekubhadhara kuburikidza neiyo yekubhadhara API inoratidzwawo. Wakawedzera LCP ma tag mune yekuita ongororo pani.
Iyo bhizinesi vhezheni yeChannel zvakare mabhenefiti kubva kuGoogle Drive kusangana. Mune Chrome kero bar, pejiIwe uchawana maGoogle Drive mafaera aunogona kuwana. Zvekare, kana iwe usingaone chero eiyi sarudzo mu Chrome 78.
Mazhinji ekuchinja mu Chrome 78 yeApple anouya kuchinhu chimwe: “Iyo tema tema yemamenu Chrome, marongero, uye nzvimbo. Zviwane muZvirongwa> Themes.
Chrome 78 inosanganisirawo zvimwe zvinhu zviri kukura zvishoma nezvishoma. Semuenzaniso, vashandisi veChannel munguva pfupi inotevera vachakwanisa kuratidza chinongedzo chenhamba yefoni muChannel, penya-kurudyi, uye kuendesa kufona kune yavo Android mudziyo.
Vamwe vashandisi Ivo vanogona zvakare kuona sarudzo yekugovana yavo clipboard zvemukati pakati pemakomputa avo uye Android zvishandiso. Clipboard yekugovana inoda kuti Chrome ibatanidzwe kune ese ari maviri maadhi ane iyo account imwechete uye Chrome Sync inogoneswa. Google inoratidza kuti iwo mavara akapera-kusvika-kumagumo akanyorwa uye kuti bhizinesi harigoni kuona zvirimo.
Chekupedzisira kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ruzivo rweiyi nyowani kuvhurwa kweiyo browser. Unogona kutarisa chinotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Google Chrome 78 paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa bhurawuza pane avo masystem, vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Muchiitiko cheavo vari vashandisi veUbuntu, Debian, Fedora, RHEl, CentOS kana chero chimwe chinobva pane izvi. Tichaenda kune iyo peji rewebhu rebhurawuza kuti tiwane iyo deb kana rmp package (sezvazvingave zviripo) kukwanisa kuiisa mune yedu system nerubatsiro rwepakeji maneja kana kubva kune iyo terminal. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Kamwe pasuru painenge yawanikwa (mune mamiriro e distros ayo anoshandisa iwo madhiri mapakeji) isu tinongofanirwa kuisa neinotevera kuraira:
Tichiri mune yeavo vanoshandisa iyo rpm mapakeji isu tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Iye zvino kune avo vari vashandisi veArch Linux uye chero chimwe chinobva pazviri, kuisirwa kunoitwa kubva kuAUR repositori nemirairo inotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Chrome 78 inouya neDNS pamusoro peHTTPS, yekumashure yemufananidzo kugadzirisa uye nezvimwe
Iyo nyowani vhezheni yeMirageOS 3.6 yave kuwanikwa nekusiyana kwakasiyana kweSolo5